Ciidamada DKMG & kuwa Kenya oo gudaha u galay Afmadow Howlgalana ka sameeyay – SBC
Ciidamada DKMG & kuwa Kenya oo gudaha u galay Afmadow Howlgalana ka sameeyay
Posted by Webmaster on Aktoober 19, 2011 Comments
Ciidamada Dowlada kenya iyo kuwa DKMG ah ee Soomaaliya ayaa howlgalo ka sameeyay deegaano ay ka mid yihiin Afmadow iyo Qooqaani sida ay xaqiijinayaan dadweynaha ku dhaqan deegaanadaas oo Saxaafada la hadlay.
Ciidamada Dowlada Kenya oo ku gooshaya gaadiidka dagaalka ee ay saaran yihin hubka cul culus iyo kuwa dowlada KMG ah ee Soomaaliya ayaa la sheegay in ay guud ahaan gacanta ku dhigeen degmada Afmadow iyo Qooqaani islamarkaana halkaasi ay ka fuliyeen howlgalo dad lagu soo qabqabtay.
Wararka ayaa intaasi ku daraya in deegaanadaasi iyo tuulooyin hoos yimaada ay ka jiraan cabsiyo dagaal iyo dhaq dhaqaaqyo ciidan oo ay labada dhinac halkasi ka wadaan.
Maalin nimadii shalay ayay aheyd markii gudaha Aqalka Madaxtooyada DKMG ah ay kulan kuwada qaten saraakiil ka socday Dowlada Kenya iyo madaxda sar sare ee DKMG ah kuwaas oo isku afgartay sida saxaafada loo shaaciyay arimo ku aadan la dagaalanka Xarakada Mujaahidiinta Alshabaab, xili ay ciidamada dowlada Kenya ay ku si siqayaan gobolka ay xadka la wadaagto ee Jubada hoose.
Sikastaba ha ahaatee arimahani ayaa waxay imanayaan xili ay qaar ka mid ah xildhibaanada DKMG ah taageereen in ciidamada dowlada Kenya ay soo galaan gudaha dalka kana fuliyaan howlgalo Alshabaab la dagaalan ah, inkastoo shacabka Soomaaliyeed qaarkood ay arintaasi walaac ka muujiyeen.